Maxaa adeeggii internet-ka looga jaray Iiraan? - BBC News Somali
Maxaa adeeggii internet-ka looga jaray Iiraan?
Mudaharaadyo ayaa Iiraan ka billowday bishii lasoo dhaafay ka dib markii qiimaha shidaalka sare loo qaaday
Adeeggii internet-ka ayaa laga gooyay qeybo ka mid ah waddanka Iiraan, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in la qorsheynayo mudaharaadyo cusub oo ka dhan ah dowladda.
Xogta la helay ayaa muujineysa in dibadbaxyada la qabanqaabinayo ay dhici doonaan maalinta Khamiista ah.
Dhageystayaasha BBC-da ee dalka Iiraan ayaa soo tabiyay inay caro weyn ka dhalatay tallaabadaas, halka waaxda adeegga internet-kana ay xaqiijisay in laga jaray meelaha qaarkood.
Wakaaladda wararka Ilna ee uu saldhiggeedu yahay Iiraan ayaa soo xigatay saraakiil magacyadooda la qariyay oo sheegaya in arrintaasi ay ku timid amar sare oo kasoo baxay dowladda.
Waxay kusoo aadeysaa iyadoo lagu baaqayo mudaharaadyo loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay dibadbaxyadii dhacay bishii hore.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa sheegtay in dad gaaraya 304 ruux la dilay kumannaan kalena xabsiga loo taxaabay maalmihii ay dibadbaxyadu socdeen, ciidamaduna ay howlgallada fulinayeen.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tirada dhimashada gaarsiisay 1,500 oo ruux, iyadoo macluumaadkana kasoo xiganeysay saraakiil aan la magacaabin oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Iiraan.
Mudaharaadyada ayaa 15-kii bishii November ka billowday magaalooyin badan oo ka tirsan Iiraan ka dib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in qiimo kordhin 50% ah lagu sameeyay shidaalka.
Taas ayaa ka dhigan in lacag dhan 15,000 oo riyaal (oo u dhiganta $0.12) lagu daray halkii liitarba. Sidoo kale darawaliinta gaadiidka ayaa loo oggolaaday inay bishiiba iibsan karaan 60 liitar oo shidaal ah kaliya. Dowladdu waxay intaas ku dartay in markaas ka dib qiimaha sare loogu sii qaadi doono ilaa 30,000 oo riyaal.
Banaanbaxyo Iiraan ka dhacay
Iran oo heshay keyd saliid oo balaayiin fuusto ah
Go'aankaas ayaa si weyn uga careysiiyay shacabka, maadaama uu waddankaas horayba ugu jiray dhaqaale xumo ka dhalatay cunaqabateynta uu Mareykanku kusoo rogay.
Inkastoo horay loo khafiifiyay cunaqabateyntaas, waxaa dib u xoojiyay madaxweyne Donald Trump oo waxba kama jiraan kasoo qaaday heshiis dhinacyo badnaa oo Iiraan lagula galay burburinta barnaamijkeeda nuclear-ka.
Dibadbaxayaasha ayaa ka careysan sare u qaadis ;lagu sameeyay qiimaha shidaalka
Markii ay mudaharaadyadu sii xoogeysteen, adeegga internet-ka ayaa gabi ahaanba la xannibay. Muuqaal lagu duubay telefoon oo markii dambe caalamka gaaray ayaa lagu arkayay ciidamo rasaas ku furaya mudaharaadeyaal aan hubeysneyn
Dad qaraabo la ah nin lagu magacaabi jiray Pouya Bakhtiari, oo 27 jir ahaa, kana mid ahaa dadka la dilay, ayaa baraha bulshada u adeegsaday inay dadka ugu yeeraan ka qeyb galka xuska geeridiisa oo ay kasoo wareegtay 40 maalmood.
Ninkan ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay magaalada Karaj ee caasimadda u ah gobolka Alborz.
Xubno ka tirsan qoyska Bakhtiari ayaa lagu soo warramay in la xiray iyadoo laga cabsi qabo in xuskiisa uu sii huriyo mudaharaadyada rabshadaha wata..
TOOS Suuqa magaalada Boosaaso oo uu dab qabsadey